कोरोनाबाट मृत्यु हुँदाकाे त्यो पल, जस्ले अस्पतालबाटै सँसारलाई रूवाएर गयो! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > कोरोनाबाट मृत्यु हुँदाकाे त्यो पल, जस्ले अस्पतालबाटै सँसारलाई रूवाएर गयो!
admin June 30, 2020 June 30, 2020 अन्तराष्ट्रिय, स्वास्थ्य	0
कोरोना भाइरसको महामारी यतिबेला जताततै व्याप्त छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ५ लाख ८ हजार ७७ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १ करोड ४ लाख ७ हजार ८५५ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यस्तै ५६ लाख ६४ हजार ३५५ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ५७ हजार ५३० जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । विश्वमा अहिले ४२ लाख ३५ हजार ४२३ जना स्वास्थ्योपचार गराईरहेका छन् भने पछिल्लो २४ घण्टामा ५४९ जनाको मृत्यु भईसकेको छ ।
त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वमा ४ हजार ९४९ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यसैबीच ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिलेसम्म ५८ हजार ३८५ जनाको मृत्यु भईसकेको छ भने १३ लाख ७० हजार ४८८ जनालाई संक्रमण भएको छ ।
त्यहाँ ७ लाख ५७ हजार ४६२ जना स्वास्थ्योपचार पछि निको भएका छन् भने ८ हजार ३१८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ । त्यहाँ सोमवार २५ हजार २३४ जना संक्रमित थपिएका छन् भने७२७ जनाको मृत्यु भएको छ ।